Madzimai emuZimbabwe Ari kuBotswana Anoti Haachangomirira VanaBaba Mukushavira Mhuri
Madzimai akawanda anobva kuZimbabwe ari muBotswana anoti ave kuzviitira mabasa emaoko vachiti kushandira vamwe vanhu kana makambani hakuna pundutso.
Aya mazwi emamwe madzimai anobva kuZimbabwe anorarama nekugadzira musoro muguta reFrancistown muBotswana vari kushambadzira vari kudarika nenzira kuti vanogadzira musoro.
Mumwe wemadzimai aya ndiMuzvare Nomalanga Sibanda, avo vanoti vakadzidzira kutauro mutauro unotaurwa munyika iyi weSetswana nekukurumidza, kuitira kuti vakwanise kutsvaga vanoda kurukwa musoro.
Muzvare Sibanda, avo vanobva kuGokwe, vanoti kugadzira bvudzi kwavo kuri kuita kuti vakawanise kuchengeta vana vavo vakasara kuZimbabwe pamwe nemumwe mudiki wavagere naye kuBotswana kunyangwe hazvo vachigara vachiita hwakitsi nagonzo nemapurisa enyika iyi.
Vabvakure havabvumidzwe kuita basa kana bhizinesi rekugadzira musoro muBotswana sezvo hurumende yenyika iyi ichiti ibasa rezvizvarwa zvenyika iyi.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinorarama nekutenga nekutengesa hove, muriwo, shangu nehembe, Amai Florence Manzungu vanoti vakaona kuti kugarira maoko hakuna pundutso vachiti varume vanodawo kubatsirwa
Amai Justina Ngwenya, avo vane makore makumi mana nerimwe chete uye vachirima muriwo kumapurazi eGlenn Valley ayo ari pedyo neguta reGaborone, vaudza Studio7 kuti kurima vari kurima asi dambudziko ndekwekutengesera.
Amai Tendai Chimombe vakazvarirwa kuBuhera ndookukurira kuMvuma vanoita basa rekusona muguta reFrancistown. Vanoti kushaikwa kwemagwaro akakwana kunoita kuti vasabhadharwe mari inogutsa kwavanoshanda.
Kuitira kuti vakwanise kuraramisa mhuri yavo, Amai Chimombe vanotengesawo matemba nedovi zvavanohodha muno senzira yekuwedzera mari yavanowana kubasa.
Asi Amai Pauline Marembo vanoti kutsvaga mafuro manyoro uku kwakavaparira sezvo vakabva vaparadzana nemurume ainge asara kumusha.
Nzara iri kunzi yapfunya chisero munyika ndiyo iri kutizwa nevanhu vazhinji vachiyenda kunyika dzakapoteredza Zimbabwe dzinosanganisira Botswana, South Africa, Mozambique, Namibia, Zambia nedzimwewo.